China Izvo zvirimo uye kukosha kweiyo indasitiri zita replate | WEIHUA Mugadziri uye Mutengesi | Weihua
Hadhi disk dhiragi + kutsigirwa kwemakomputa
alum mundiro (ndiro yemhangura) + purinda + chitambi
Alum mundiro + kupura + CD zviyo + anodizing
Alum zinc alloy diecast + galvanize + pende
Alum + inotonhora forge + pendi (anodize) + zviyo
PC PET kudhinda zvikamu
simbi + mhangura + etching + pendi + electroforming
Alum + Yakamisikidzwa Inogadzira + cnc + Anodized
Optical Coating + PVD Kuronga + Kupfira
Simbi Kufa Kutemwa
Aluminium Kuwedzera Ruzivo
Nameplate Dhizairo Maitiro
Izvo zvirimo uye kukosha kweiyo indasitiri nameplate | WEIHUA
Industrial nameplate inowanzoreva chitaera chakasungirirwa pachigadzirwa mushure mekunge chigadzirwa chaiswa pamusika, icho chinopa vashandisi ruzivo rwakadai sekugadzira chiratidzo chechiratidzo, musiyano wechiratidzo, uye chiyeuchidzo chechigadzirwa.
Iyo indasitiri izita replate rinonyanya kushandiswa kunyora imwe tekinoroji dhata yemugadziri uye nematanho ekushanda mamiriro, kuti ishandiswe nemazvo pasina kukuvadza michina.
Izvo zvigadzirwa zvekugadzira maindasitiri emazita mahwendefa simbi nameplatesasiri esimbi: simbi nameplates anosanganisira zinc chiwanikwa, mhangura, simbi, aruminiyamu, simbi isina simbi, nezvimwewo, asi aruminiyamu inonyanya kushandiswa mukugadzira, nekuti iwo mazita epapepa anogadzirwa nekugadzirisa ari mashoma -grade, yakasimba, uye isina ngura - Kwete - epurasitiki yesimbi, acrylic organic bhodhi, PVC, PC, bepa, zvichingodaro.
Zvekushandisa muzvigadzirwa zvemagetsi nemidziyo, iwo maindasitiri emazita ane ruzivo rwechigadzirwa uye zvakasarudzika zvehunyanzvi zvinodiwa.
Chii chine maindasitiri esimbi izita rine?
1. Zita replate rinofanira kunge rakazara uye rakajeka, uye panofanirwa kunge pasisina kurohwa. Kumucheto kwezita replate rakatsetseka uye risina kumonana.
2. Zita replate rinofanira kunge riine ruzivo senge zita rezvigadzirwa, modhi, paramita yemagetsi, paramita, mucherechedzo, nhamba yesitifiketi, zuva rekutumirwa, chitupa nhamba uye mugadziri;
3. Ruzivo rwekuyambira rwunofanirwa kupihwa pazita rezita, sekuti "Zvinorambidzwa zvachose kuvhura chivharo nemagetsi", "Kubhadharisa uye kuburitsa munzvimbo isina chiratidzo chekuputika", nezvimwe.
Maindasitiri emazita epamhepo anodikanwa kune inotevera ruzivo
1. Logo.Inotendera vashandisi uye vanoisa kuti vakurumidze kunzwisisa mhando yechigadzirwa, inoenderana gasi / guruva uye tembiricha mapoka.
2. Chitupa nhamba.Sitifiketi iyo inogona kuratidza chigadzirwa ichokwadi uye inoshanda, dzivisa kusarudza fake uye yakaderera chigadzirwa.
3.Fekitori zuva.Tinogona kuziva hupenyu hwechigadzirwa chechigadzirwa nekukurumidza, uye kutonga kana kutsiva batch nyowani yezvigadzirwa kubva kuhupenyu kutenderera.Dzivisa kuita kwekutadza nekuda kwekushandisa-kwenguva refu.Such seganda sikuruu ngura kana kurasikirwa, zvakakomba ngura, yekuisa chisimbiso mhete kukwegura haigone kusvika pakuiswa chisimbiso.
4. Nyevero mameseji. Unogona kubvumira kuchengetedza uye kushandisa vashandi kuti vadzivise kushanda zvisina kufanira kunokonzerwa nekukuvara kwemidziyo.
Kupfupisa, iyo simbi nameplate yezvigadzirwa zveindasitiri ibhuku rakakosha kwazvo, uye ruzivo rwusina kukwana kana rwusina chokwadi rwunokonzera matambudziko asina basa kunzvimbo yekushandisa nevashandisi.
Kuti udzidze zvakawanda pamusoro pezviratidzo zvesimbi , zita remunhu rakasarudzika, nezvimwewo, ndokumbira ufonere Weihua Technology. Isu tine yepamusoro-soro, inoshanda-yepamusoro, uye hunyanzvi hwekuvandudza bhizinesi timu inokwanisa kuzadzisa zvido zvako.
Post nguva: Nov-14-2020
Huizhou Weihua Technology Co, Ltd.
Zvigadzirwa - Sitemap - AMP Mobile chaiyo cnc machining chaiyo zvikamu , yekusimbisa uye kusimuka pvt.ltd , nyika yakanyatsojeka stamping , chaiyo inofa neku stamp,